Hagbada Cosob ee Xisbiga Waddani By Mukhtar Cilmi
Thursday March 19, 2020 - 13:09:54 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Xisbigii waddani waxa ku dhacay dhaqaalo xumo iyo musuq maasuq naafeyay xisbiga wata keentay in ay guddi dhaqaale khusiya musharaxiinta waddani ee u soo tartamay doorashooyinka 2022! ee sharciga waafagsan.
Xisbigii waddani wuxuu imika ku dawarsanaya in u ka gurto musharaxiinta golaha deegankamisaaniyaad 225 musharaax min 20 kun oo dollarka cala musharaxee !! Taas oo noqonaysa4.500.000$ afar milyen iyo shan boqol kun dollar?!!, waa shay cajib ah oo lala yaabo runtii, iyadoo lada ogyahay in ay doorasho la qaban doonin sanadkan iyo ka danbe be oo si sharciya 2022 la qabanayo!!.iyado sanadka 2021 la furi doono xisbiyo cosob si ay ku beegmaan 2022 doorashooyinkaas!. ayuu raba cirro in u urursado hanti into kantagin saaxada siyaasadda 2022!
Runtii waa wax laga khajilo weeye in uu xisbigan marxaladaan gaadho oo u khiyaamo masharaxiinta deegaamada Somaliland ee hamiiga siyaasideed leh ,laakin maaha shay ku cosob Cirro iyo maafiyadiisu in ay been ku dhaqmaan .
Waa fadiixad ka mid ah fadiixadaha maafiyada kooxda cirro. Waxaan u so jeedinaya musharaxiinta in ay 2021 ururyo cosob oo badan la furayo ikhtiyaar kaaguna waa waasic meesha aad iska soosharaxisid.lknhagbadan waddani la dhaho iska ilaaliya waa jeef oo jag!!.
Ka taxadiira xisbi been iyo munafiqnimo wax ku raba shacabow !!.